သရဲအကြောင်းစာမျက်နာ(၂) - ချစ်သူ့ အ်ိမ်ကလေးမှကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ..
တွေသမျှသရဲအကြောင်း(၁)မှ အဆက် ဖြင်ပါတယ်သူငယ်ချင်းများ။
ကျနော် ငယ်စဉ်က မိဘတွေက နယ် တွေ မှာတာဝန်ကျလေတော့နယ်တော်တော်များများ မှာနေခဲ့ရဘူးတယ်။ အဲဒီလို နေခဲ့ရတဲ့ နယ်မြို့တခု မှာတော့နယ်မြေကြမ်းတယ် လို့ပြောရမလား တစ္ဆေ သရဲ ခြောက်လှန့်တာတွေ မကြာခဏ ဆိုသလို ကြားရလေ့ရှိတယ် ။ ကျနော် ပထမ ရေး ဆေးရိုးပင်သရဲ အဖြစ်အပျက်ကလဲ အဲဒီနယ်မှာ ပဲ အခု ရေးမယ့် ကျနော် သူငယ်ချင်းတယောက် ရဲ အမေဖုတ်ဝင်ပြီးသေတာ လဲ အဲဒီ နယ်မှာပဲ ဖြစ်တယ် ။ ကျနော် နောက် ထပ်အတွေ့ အကြုံတွေ ၂ ခု ၃ ခုလောက်ရှိသေးတယ်။နောက်အခွင့်ကြုံရင် ကျနော် ဆက်ရေးပြပါ့မယ်..အခုအဖြစ်အပျက်ကလေးကိုတော့နံမည်တွေပြောင်းလဲ ထားပါတယ် ။
အခုကျနော် ပြော ပြမှာက သူငယ်ချင်း ဖြစ်တဲ့ သန်းဦးတို့သားအမိကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ဆိုးကြီးပါ ။ ဒီလိုဗျ ကျနော် ရယ်သူငယ်ချင်း တယောက်ရယ်ပေါင်း ပြီး စားသောက်ဆိုင်လေးတခုကို ရှယ်ယာဖွင့်ကြတယ်ဗျ ။ နယ်မြို့ ဆိုတော့ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးတွေ သိပ်မလိုဘူးဗျ ။ ပြီးတော့ကျနော် တို့ ဆိုင်ကလေးက ရပ်ကွပ်ရဲ့ လူသွားလူလာရှင်း တဲ့နေရာ မှာဖွင့်ထားတာ ။ တနေကုန် တစွတ်စွတ်သောက်တဲ့သူတွေရော ၊ ညပိုင်းရောက်မှသောက်တဲ့သူတွေရော တနေကုန်နီးပါး ကျနော်တို့ ဆိုင်မှာ လူပြတ်တယ် ဆိုတာ မရှိဘူးဗျ ။ နောက်တခု က အရည်နဲနဲဝင်လို့ဆူပူအော်ဟစ်နေလဲ ပါတ်ဝန်းကျင်က လူသူလေးပါး ရှင်းလေတော့ ပြဿနာ ဆိုတာ မရှိသလောက်ပဲ ။ မိသားစုထဲ ၊ ရပ်ကွက်ထဲ မှာမကျေနပ်ချက်တွေ လင်မယားခြင်းမကျေလည်တာတွေ ကို ကျနော် တို့ ဆိုင်မှာသောက်ပြီး အော်ဟစ်ရင်ဖွင့် နေလဲ ဘာမှမဖြစ်ဘူး ။ ဒါမှ မဟုတ် ဇရက်မင်းစည်းစိမ် နဲ့သောက်ချင်သူတွေ အတွက်လဲ ခြံဇောင်းမှာ ရှိတဲ့ ၀ါးရုံပင်တွေ အောက်မှာ ၀ါးကုလားထိုင်တွေ ချပေးပြီး စားပွဲဝိုင်းတွေ ပြင်ပေးထားတယ် ။ အိပ်ပြီးသောက်လိုသောက် ၊ ထိုင်ပြီးသောက်လိုသောက် ၊အမူးလွန်ပြီး အိပ်ပျော်နေလဲ ဘာမှမဖြစ်စေရဘူး ။ အမြည်းအတွက်ကလဲ ကြက်ရိုးနဲ့ဂွေးတောက်ရွက်ဟင်းချိုအိုးကို မီးနွေးနွေး တနေကုန် ဒန်အိုးကြီးတလုံးနဲ့တည်ပေးထားတယ် ။ အဲဒီထဲ ကကြိုက်သလောက်သောက် ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘူး ။ ကျနော် တို့ဆိုင် ကလေးက အဲလို အရက်ဆိုင်တို့ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတို့နဲ့ ပြည်စုံလေတော့တနေကုန် လူမပြတ်တာ မဆန်းပါဘူးနော့် ။
အဲဒီကျနော် တို့ ဆိုင်မှာ လာသောက်ကျတဲ့သူတွေ ထဲမှာ သူငယ်ချင်းလဲ ဖြစ်တဲ့ သန်းဦး ဆိုတာပါတယ် ။သူတို့က သားအမိနှစ်ယောက်ထဲ ရှိတယ် ။ အမေဖြစ်တဲံ သူက သန်းဦး ကိုငယ်ငယ်ကတည်းက အလိုလိုက်လေတော့သန်းဦး အရက်သမားဖြစ်နေတာ အမေဖြစ်သူက တားတယ် ဆိုရုံလောက်ပဲ တားတယ်။ စီးပွားရေးအနေနဲ့ ကတော့သိပ်ပြေလည်လှတယ် မဟုတ်ဘူး ။ ဒီလိုနဲ့ သန်းဦးတို့ နေတဲ့ ရပ်ကွက် ကို သက်ဆိုင်ရာက ကျူးကျော် ရပ်ကွပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး အိမ်တော်တော်များများ ဖျက်ခိုင်းလိုက်တဲ့ အထဲ မှာ သန်းဦးတို့သားအမိရဲ့အိမ်လေးပါသွားတယ်။ဖျက်လိုက်တဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေ ကို နေရာပြန်ချပေးတာက ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ရပ်ကွပ်အစွန်မှာ ရှိတဲ့ နတ်စင်ကုန်း ကြားရှိ လယ်မြေနေရာဟောင်း ကွပ်လပ်ကြီးမှာ အိမ်ယာကွက်ရိုက်ပြီးနေရာပြန်ချထားပေးတယ် ။
အဲဒီနေရာက အရင်ကဆို လူသူအသွားအလာကိုမရှိသလောက်ပဲ ။ ညဖက်ဆိုပိုဆိုးတာပေါ့ ။ နောက်တခုက ဘုန်းကြီးကျောင်း အနောက်ဖက်ခြံအစပ်မှာ ကုက္ကိုပင်အကြီးကြီးတွေ ရှိတယ် ။ သန်းဦးတို့သားအမိက အိမ်ယာကွက် မဲနှိုက်တာကလဲ ကံကမလိုက်တော့ရပ်ကွက်သစ်ရဲ့ ချောင်အကျဆုံး အပိုင်း ဖြစ်တဲ့အပင်ကြီးတွေ နဲ့နတ်စင်ကုန်း ကြားက အိမ်ယာကွက်မှာ မဲပေါက်တယ် ။ သန်းဦးအမေကြီးလဲ အဲဒီထဲ က စိတ်ဓါတ်ကျသွားတယ်ထင်တယ် ။ နောက်ပိုင်း အိမ်တွေဖျက် ပြီပြောင်း နေရာသစ်မှာ အရင်လောက်ကောင်ဲး့အိမ်ပြန်မဆောက်နိုင်တော့ ပဲ သားအမိ၂ယောက် နေလောက်ရုံ တဲသာသာ အိမ်ကလေးတလုံးပြန်ဆောက်နေတယ် ။ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေဖြစ်သွားတဲ့ သန်းဦး ရဲ့အမေ ဟာ တစစ နဲ့ရောဂါတွေပါ ၀င်လာတော့တယ် ။ တရှောင်ရှောင်နဲ့ ဖြစ်နေရာကနေ အိပ်ယာထဲ လဲပါတော့တယ် ။
သန်းဦးက လဲ အရင်ကတည်းက လက်ကြောမတင်း ခဲ့သူ အသောက်အစားကလေးက ရှိပြန်တော့အိမ်စီးပွားရေးကို ဘယ်လိုမှမထိမ်းနိုင်တော့ ပါဘူး ။ သူတို့ သားအမိအခြေနေကို သိတဲ့ ကျနော်တို့သူငယ်ချင်း တစု က တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပါတယ် ။ စားဝတ်နေရေးအတွက် ဘာမှပူစရာမလိုပါဘူး ။ သန်းဦးက ကျနော်တို့ ဆိုင်မှာ ၀ိုင်းကူလုပ်ပေးတယ် ။ ညဆိုင် သိမ်းပြီး ပြန်ရင်သန်းဦး က နဲနဲ ပါးပါးသောက်သွားတယ် ။ အရင်လိုတော့မသောက်တော့ပါဘူး ။ သူစိတ်အာသာပြေရုံလောက်ပဲဆိုပါတော့။ နောက်တနေ့သူ့အမေစားဖို့သောက်ဖို့အတွက်ပါကျနော် တို့က စီစဉ်ပေးလိုက်တော့သူတို့သားအမိအတွက်အဆင်ပြေပါတယ် ။ဒါပေမယ့် ကျနော် တို့ လဲ သန်းဦးအမေဆီကိုလူမမာ သတင်းမေး ဖို့ အတွက် ကိုတော့မရောက် ဖြစ်ပါဘူး ။ ဆိုင်မှာနေ့တိုင်းတွေ နေရတဲ့ သန်းဦးကိုပဲမေးနေရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့တနေ့  ညပိုင်းဆိုင် သိမ်းတော့သန်းဦး အရက်တော်တော်များများသောက်ထားပါတယ် ။ ပြီးတော့ငိုလဲ ငိုနေတယ် ။ ကျနော် တို့က အရက်သောက်တာများပြီး ကြောင်လို့ငိုတယ်ထင်တာပေါ့ ။ နောက်သေသေ ချာချာ မေးကြည့်တော့မှ သန်းဦး က ပြောတယ်။ အိမ်နားက လူတွေ က သူ့ကိုပြောတယ်တဲ့ မင်းအမေ ဖုတ်ဝင်နေလားမသိဘူး ဂရုစိုက်ဦး သန်းဦးလို့ပြောကြတယ်တဲ့ ။ ငါလဲ ပထမ တော့သူတို့အဲလိုပြောတာကို စိတ်ဆိုး မိတယ် ။ နောက်ပြောဖန်များလာတော့မှ ငါလဲ သေသေချာချာ သတိထားကြည့်တယ် ဟုတ်နေမလားမသိဘူးကွာ လို့ ပြော လာပါတယ် ။ ငါလဲ မင်းတို့ ကိုပြောပြရင် ထပ်ဒုက္ခပေးနေသလိုဖြစ်မှာ စိုးလို့မပြောတာ ။ ခုရက်ပိုင်းအမေ က သိသိသာသာ ထူးခြားလာသလိုပဲ ။ ငါအိမ်ပြန်ရမှာတောင် စိတ်ညစ်တယ်ကွာလို့ပြောပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကျနော် တို့ က သေချာအောင် မင်းအမေက ဘယ်လိုတွေ ထူးခြားတာလဲ သန်းဦးလို့မေးတော့..ညဖက်ဖက်တွေ ဆို အမေလမ်းထထလျှောက်တယ် ၊ နောက်အမှောင်ထဲ မှာ သူသွားတာလာတွေက သန်သန်မာမာ ဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ်ပဲ ၊ ငါ မင်းတို့ဆိုင်က အပြန် ညဖက် ထမင်းနဲ့ စားဖို့ဝက်သားဟင်း ၊ အမဲသားဟင်း အဲလိုအသား ဟင်း တွေ ၀ယ်သွားတဲ့ ညတွေ ဆို အမေ စကားပြောသံကအစ ယောင်္ကျားကြီးတယောက်ရဲ့ အသံလိုပဲ အသံသြသြကြီးနဲ့ပြောတတ်တယ် ။စားရင်လဲအငမ်းမရစားတတ်တယ်။ အသားဟင်းမပါပဲ အသီးအရွက်ကြော်ပဲ ၀ယ်သွားတဲ့နေ ဆို သောင်းကျန်းချင်တယ် ။ ဘာမှမစားတော့ဘူး ။ ငါနေ့လည် မင်းတို့ဆိုင်ကိုလာတဲ့နေဆိုရင်တော့တနေကုန် အိပ်ယာထဲမှာ ပဲ လို့အိမ်နီးနားခြင်းတွေ က ပြောကြတယ် ။ ညနေ နေ၀င်လို့ မိုးချုပ်ကာ နီးပြီ ဆိုတာ နဲ့ တို့အိမ်ကနေ ချိုးချိုးချွတ်ချွတ် အသံတွေ ကြားလာရတယ်လို့အိမ်နီး နားခြင်းတွေ က ပြောကြတယ် ။ကြာတော့ အမေဆိုပေမယ့် ငါလဲ အိမ်ပြန်ရမှာတောင် ကြောက်လာတယ်ကွာ လို့ပြောပြပါတယ်။ ကျနော်တို့လဲ အံ့အားသင့် သွားတယ်။
သန်းဦး ဒီကိစ္စက အဖြုအမဲ သေချာအောင်သိ မှကောင်းမှာနော် တော်ကြာနေ မင်း အမေဖြစ်နေတော့မင်းငရဲကြီးလိမ့်မယ် ။ မင်းအခုဘယ်လို လုပ်ချင်လဲလို့ ကျနော်တို့ က မေးပါတယ် ။ အဲဒီလိုကျတော့သန်းဦးက ငါအိမ်နားက သူတို့နဲ့ သိတဲ့ ပယောဂါဆရာတယောက် ကိုပြကြည့်ပါလားလို့ပြောတယ် ။ အဲလို ပြသစစ်ဆေး ဖို့ က ကတော့ ပွဲဖိုး အမွှေးတိုင် ဖယောင်တိုင်ဖိုးတွေလိုသေးတယ် ။ ငါ့မှာလဲ ပိုက်ဆံက မရှိတော့အခက်တွေ့ နေတယ် လို့ ပြောပါတယ် ။ ကျနော် တို့ က လဲ ဒါဆိုရင်တော့မင်းမပူ နဲ့ မနက်ဖြန် ငါတို့ကြည့်စီစဉ်မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ် ။အဲဒီည မှာ သန်းဦး အိမ်မပြန်ချင်ပြန်ချင်ပုံစံမျိုးနဲ့ သူနေရာ ရပ်ကွပ်သစ်ဖက်ကို လှမ်းရင် အမှောင်ထဲမှာ တိုးဝင် ပျောက်ကွယ် သွားပါတယ် ။
နောက်တနေ့ မှာတော့သန်းဦးခါတိုင်းလိုပဲ ဆိုင်ကိုရောက်လာတယ်..။ သူမျက်နှာ မှာ ညိုးငယ်စိတ် ၊ အားငယ်စိတ် ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ အရိပ်အရောင်တွေ ကို တွေ့ နေရတယ် ။ကျနော်တို့ လဲ ဆိုင်အတွက်တနေ့တာ လုပ်စရာရှိတာ တွေ ကို မြန်မြန်လုပ်ထားလိုက်ပြီး ကျနော် စက်ဘီးနဲ့တခြားသူငယ်ချင်းအရင်းအခြာတွေကိုတိုင်ပင်ဖို့ အတွက်ရယ် နောက် တတ်နိုင်သမျှ ငွေကြေးကူညီကြဖို့ အတွက် ထွက်လာလိုက်တယ် ။
ကျနော် သူငယ်ချင်းတွေ စုရပ်ဖြစ်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ရောက်တော့စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်း သုံးလောက်လောက်နဲ့ အရင်တိုင်ပင်ကြည့်လိုက်တော့ သူတို့က အားတက်သရော ကူညီကြမယ်ပြောတော့ကျနော် စိတ်သက်သာရာရသွားတယ်။နောက်ငွေကြေးအတွက် စုလိုက်တာ သုံးရာလောက်ရတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျနော်တို့ကျောင်းမုန့်ဖိုးက ၁၅ ကျပ်ပဲရတယ် ။ ထမင်းကြော်တပွဲ ကို ၅ ကျပ် ၊ လက်ဖက်ရည်တခွက် ၃ ကျပ်ခေတ်မို့ လို့သုံးရာဆိုတဲ့ငွေက တော်တော်လေးထိရောက်ပါတယ် ။
ငွေရေးကြေးရေးအတွက် က ရပြီဆို တော့ ဖြစ်နေတဲ့ပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့က အခက်တွေ့ ကြပြန်တယ် ။ နေမကောင်း ဖြစ်လို့ဆေးခန်းကို အလွယ်တကူ ပြလို့ ရပေမယ့် ခုလိုပရလောက သားတွေ နဲ့ ပါတ်သက်တာကြတော့အရမ်းမလုပ်ရဲကြဘူးဖြစ်နေပြန်ရော ။ ဒါနဲ့ ကျနော် လဲ သူငယ်ချင်းတွေ ကို ဒီပြဿနာကိုနိုင်နင်းအောင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် ဆရာတယောက်ယောက် ကို စုံစမ်းထားကြဖို့ ပြောရင်း စုလို့ ရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ကိုကျနော် ယူပြီးပြန်လာခဲ့တယ် ။ဆိုင်ရောက်တော့ကျနော် အပြန်ကိုမျှော်နေတဲ့ သန်းဦးကို ဆိုင်ဝ မှာတင်တွေ့ လိုက်တယ် ။ ကျနော် ပြောလိုက်တယ် သန်းဦး ဘာမှ မပူနဲ့တော့ကျော်စိုးတို့ထွန်းထွန်းကြီးတို့ နဲ့တိုင်ပင်ပြီးပြီ ၊ လိုတဲ့ပိုက်ဆံလဲ ရခဲ့ပြီ မင်း စိတ်အေးအေး ထားတော့ လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
ညနေပိုင်းမှာ ကျနော့ ဆိုင်ကို ကျော်စိုးတို့အဖွဲ့ရောက်လာတယ် ။ ဆရာတယောက်ကိုတွေ့ထားပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ အထက်ဂိုဏ်းဆရာ တယောက်ဖြစ်ပြီး ပရလောကသားတွေနှောင့်ယှက်တာ ကိုနိုင်နင်းကြောင်း မနက်ဖြန်တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး မိမိတို့ဖြစ်နေသော ပြဿနာကို ပြောပြပြီး လူနာကိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြပါတယ် ။ ဒီလိုအစီစဉ်တွေချပြီး ညမိုးချုပ်တော့ကျနော် သန်းဦးအမေအတွက် အကယ်၍ သာမာန်ရောဂါသည်ဖြစ်နေပါကလဲ အဟာရ ရှိစေရန် နှင့် အစားအသောက်နှင့်ပါတ်သက်သောထူးခြားမှု့ ကိုသိစေရန် အတွက် ဈေးထိပ်တွင် ညပိုင်းရောင်းသောကြက်ကင်သည် ထံမှ ကြက်ပေါင်ကင် များဝယ်သွားပြီးကျွေးရန်အတွက် လိုသောပိုက်ဆံကိုပေးကာ စောစောပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ် ။ နောက် လူနာ၏ စားပုံသောက်ပုံကို သေချာမှတ်ထားရန်ပါ မှလိုက်ပါတယ် ။အဲဒီညနေ က သန်းဦးဟာ သောက်နေကြ အရက်ကိုပင်မသောက်တော့ ပဲ ကျနော်ပေးလိုက်သောပိုက်ဆံကိုလက်ထဲ မှာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်ပြီး ပြန်သွားပါတော့တယ် ။
အဟဲ ဂါးဂါး ။ လာပန်ပြီဗျို့ ။ သရဲ။ အနော် ရေးထားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ငဇူးလည်း သရဲ ခဏခဏ အခြောက်မခံရဖူးပါ။ ။ ရေးစရာတွေတော့ ရှိသေးတာပေါ့နော်။ အကုန်လုံးရေးလိုက်ရင် ရေးစရာ ကုန်သွားမှာဆိုးလို့ ချန်ထားတာပါ။ ( အမှန်တော့ ပျင်းတာ ဟီး၊ မအားတာလည်း ပါပါတယ်) ။ အဲဒီလိုနဲ့ ဆိုဒ်မှာ သရဲပိုစ် အတတ်နည်းနေတုန်း အွန်လိုင်းက ညီအကိုလိုဖြစ်နေတဲ့ ကိုစိုးကြီးဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းက သူတွေ့ကြုံဖူးတဲ့ သရဲအကြောင်းကို စာလေးရေးပြီး ပေးပို့လာတယ်ခင်ဗျ။ အနော် ဖတ်ကြည့်တယ်။ မိုက်တယ်။ အဲဒါနဲ့ မူရင်း မပျက် ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်။ မျှဝေ ခံစားလို့ ရအောင်ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်ပြင်လိုက်ရင် မူရင်းပျက်သွားမှာလည်း ဆိုးလို့ပါ။ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်ပါနော်။
(စကားချပ်။ ။မိတ်ဆွေတို့လည်း သရဲ၊ တစ္ဆေဇာတ်လမ်းများရှိတယ်၊ ရေးသားပြီး ပို့ချင်တယ်ဆို ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးက သရဲတွေ အနော်ပဲ ခြောက်သလိုဖြစ်နေမှာဆိုးလို့ပါ။ ကိုယ်ချည်းရေးနေရတော့ ဟီး ။ အဲဒီလို ပေးပို့မယ်ဆိုရင် အနော် ပြန်ပြီးတော့ တင်ပေးပါ့မယ် ခင်ဗျ။ ကတိပေးပါတယ်။ )
ကဲ! လာပြီဗျို့ !
[stextbox id="info" caption="ဆေးရိုးပင် သရဲ"]ငဇူး..
မင်းက သရဲ အကြောင်းတွေ ဆိုဒ်မှာတင်ထားတာ တွေ့တော့ 
ငါလဲကိုယ်တွေ့ကြုံတာတွေ လေး ငါး ခါလောက်ရှိတယ် ။ မင်းဆီကိုရေး ပေးဖို့ 
စဉ်းစားထားပေမယ့် ငါလဲစာရေးရမှာ ပျင်းတာနဲ့ မရေးဖြစ်ပဲ ဖြစ်နေတာ။ ခုတော့ 
မင်းဆိုဒ်မှာ အသစ်မတက်တာလဲ ကြာနေပြီဆိုတော့ 
ဒီလို ကွ..ကျန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က ငါနယ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့
စီးပွားရေးသွားလုပ်ဘူးတယ် အဲမှာလေးနှစ်လောက်ကြာလာတော့ သူငယ်ချင်းတွေ
ပိုများလာတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကျော်စိုးဆိုတာ လူက၀၀ကြီး အသက်ကတော့ ငါနဲ့
အတူတူပဲ ..။ ဒီကောင်က ညဖက်ဆိုရင် မြို့ ပြင် အကျဉ်းထောင်ဘေးနားက
သူ့အကိုဘဲခြံ မှာ ညဖက် သွားစောင့်အိပ်ပေးရတယ် ။
တနေ့ငါတို့ နဲ့ည ၁၁ နာရီလောက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး အပြန်
လမ်းတ၀က်လောက်အထိ ငါတို့နဲ့ လမ်းကြုံပေမယ့် ကျော်စိုးကတော့ ဘဲခြံ
ကိုစက်ဘီး နဲ့ ဆက် သွားရတယ်..ဒီလိုနဲ့ တို့ လဲ လမ်းခွဲပြီး အပြန်မှာ ငါက
အိမ်မှာဝင်နေခဲ့ပြီး နွေရာသီဆိုတော့ ရေချိုး ပြီး ဆရာမင်းသိင်္ခ စာအုပ်
ကိုဖတ်နေလိုက်တယ်။ငါက ဆရာမင်းသိင်္ခရေးတဲ့ ၀တ္တုတွေ အဲအချိန်တုန်း က
သိပ်ကြိုက်တာ..ထားပါတော့ အိုက်ကလဲ အိုက်ဆိုတော့ငါလဲ
အချိန်တော်တော်ကြာဖတ်နေမိတယ်…နယ်ဖက်တွေမှာက လျှပ်စစ်မီးကလဲ အရမ်းပြတ်နေတာ
ညည့်တော်တော် နက်မှ မီးလာတယ်..အဲလိုဖတ်နေရင်းနဲ့ကျော်စိုးတို့ 
ဘဲခြံနားက လူရယ်အဖော်တစ်ယောက် ရယ် ကျနော် ဆီလာခေါ်တယ်ဗျ.. “ကိုစိုးကြီး
ထပါဦးဗျ..ခင်ဗျားတို့သူငယ်ချင်း ကျနော့် အိမ်ပေါ်ပြေးတက်လာပြီး
ပြူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်ပြီး ဘာမှလဲမေးလို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်”တဲ့..
ငါလဲ စာဖတ်နေရာ က ထပြီး ကြည့်လိုက်တော့ကျော်စိုးတို့ဘဲခြံနားက
လာပါဦးကွာကျော်စိုးကြီး ဘာဖြစ်နေတာလဲ မသိဘူး လိုက်ကြည့်ပါးဦး..ငါလဲ
သူငယ်ချင်းတယောက်ကို သွားထပ်ခေါ်ပြီး ကိုမြင့်အေးတို့အိမ်ဖက်
လိုက်သွားတယ်..ဟိုရောက်တော့ ကျော်စိုးကြီး ဒူးနှစ်လုံးကိုလက်၂ဖက် နဲ
့ဖက်ပြီး တုန်နေတယ်.. တုန်တာမှကိုမြင့်အေး အိမ်ခင်းထားတဲ့
၀ါးခြမ်းပြားတွေ ဂျမ်းဂျမ်း မြည်အောင် တုန်နေတာ..
ဒီကောင်ရန်ဖြစ်တာတော့ မဟုတ်နိုင်ဘူး..ကိုမြင့်အေးကလဲ ပြောတယ်
ရန်ဖြစ်သံလဲမကြား မိဘူးတဲ့ ဖြစ်ရင်လူခြေတိတ်ချိန်ဆိုတော
့ကြားရမှာပါတဲ့..ငါလဲ ကျော်စိုးနားကပ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ 
ဒီကောင်မူမမှန်ဘူး ..ကြောင်တောင်တောင် နဲ့ ..ငါ ပထမဆုံး ဒီကောင့် ပခုံး
ကိုခပ်နာနာ ရိုက်ပြီး ဟေးကောင်လို့အကျယ်ကြီး အနားကပ်အော်
လိုက်တယ်..အဲလို အော်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ ၀ုန်းခနဲ အိမ်ရှေ့ဖက် ထပြေးတော
ငါလဲ ကိုမြင့်အေးတို့ ကို လှမ်းအော်လိုက်တယ်
ပြေးပြီးဖမ်းထား…ဖမ်းထားဆိုတော့ကိုမြင့်အေးတို့ လဲ ဘုမသိဘမသိ နဲ
့ဝိုင်းဖမ်းကြတာ အိမ်ရှေ့မြေကွပ်လပ်မှာ လုံးထွေးနေတာပဲ..ငါလဲသူတို
့အပေါ် ခုန်အုပ်ပြီး ၀င်လုံးရတယ် ကျော်စိုးက ၀၀ကြီး
သန်လဲသန်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ လေးယောက်လုံးဝိုင်းချုပ်မှ ရတယ်
..ဒီကောင်နဲနဲမောပြီး ငြိမ်သွားပြီဆိုတော့ မှ အိမ်ပေါ်ပြန်တင်ပြီး
ရေခပ်တိုက်တယ်..မသောက်ဘူး နောက်မထူးဘူး ဆိုပြီး ဘုရားသောက်တော်ရေတွေ နဲ့ 
ခေါင်းကနေလဲလောင်းချ တိုက်လဲ အတင်းတိုက်လိုက်တယ်..ဒီနေရာမှာ တချက် က ငါလဲ
သရဲစီးတာတို့အပမှီတာတို့ ဆိုရင် ဘုရားသောက်တော်ရေတို့ 
ဘုရားညောင်ရေအိုးထဲ ကရေတို့တိုက်ကတယ်ဆိုတာကြားပဲ ကြားဘူးတာ
လက်တွေ့တခါမှ မကြုံဘူးခဲ့ဘူး..ခုတော့လက်တွေ့ ပဲ ကျော်စိုး
ခဏကြာတော့ငြိမ်သွားတယ်..ပြီးမှ ပါးစပ်က ဟို..ဟို..ဟို…ဆေးရိုးပင်…ဆိုပြီး
ဘဲခြံသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်း က ဆေးရိုးပင်ကို
လက်ညိုးထိုးပြတယ်..ငါတို့ လဲ လရောင်နဲ့ ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရတဲ့
ဆေးရိုးပင် ကိုသေသေချာချာလှမ်းကြည့်တော့ မှ ဆေးရိုးပင်အောက်မှာ
အဲဒီတော့ မှ ကိုမြင့်အေး က ငါသိပြီ စိုးကြီး …ဒီကောင့်ကိုဆေးရိုးပင်က
အစွန်ဆုံးလေ..ငါ့အိမ်ပြီးရင် ကွင်းပြင်..ကွင်းပြင်ပြီးကျော်စိုးတို့ 
ဘဲခြံပဲ ရှိတော့ တာ..တည ငါ.အိပ်မရလို့ 
ဆေးရိုးပင်အောက်မှာ လူတယောက်လိုလိုထင်တယ် မဲမဲကွကွနဲ့ ဘာတွေလုပ်နေလဲ
ဆေးရိုးပင်ပေါ်တက်သွားရော..ငါဆက်ကြည့်နေတာ ပြန်ဆင်းမလာတော့ 
ဘူးကွ..တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲအချိန်မှာ ငါကြက်သီးတွေ ထလာတာနဲ့စိတ်ထဲ
မသိုးမသန့်ဖြစ်လာတော့ အိမ်ပေါ်တက်လိုက်တယ်..အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ငါ
ဆက်ကြည့်နေသေးတယ် စောစောက အပင်ပေါ်တက်သွားတဲ့ ကောင်ပြန်ဆင်းမလာတော့ 
ဘူး..အဲလိုမျိုးပဲ ငါ မကြာသေးခင်ကမှ တခါထပ်တွေ့ ရသေးတယ်..
ကိုမြင့်အေး ပြောပြနေတုန်းမှာ ကျော်စိုးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပြီး အဲတော့ မှပြောတယ်..
ငါမင်းတို့ နဲ့ လမ်းခွဲလာပြီး ပြန်လာတာ အဲဒီဆေးရိုးပင်အောက် ရောက်တော့ 
စက်ဘီးကိုသဲဆွဲ သလို ဖြစ်ပြီး တုံ့ခနဲ ဖြစ်ပြီး စက်ဘီးရောလူရောလဲ
သွားတယ်..ငါပြန်ထပြီး စက်ဘီးကို ခွနင်းပြီး ပြန်ထွက်ဖို့ လုပ်တဲ့
အချိန်မှာ ငါ့်စက်ဘီး ကို တယောက်ယောက် ဆွဲထားသလိုပဲ..နင်းမရဘူး..ငါ
စောစောကလိုပဲပြန်ဖြစ်တယ်..အမှန်ဆို အဲနေရာ သဲလမ်းကုန်းဆင်းလေး မနင်းဘဲ နဲ
စက်ဘီးကိုဆွဲလိုက်တယ်..ငါလဲ စက်ဘီးကိုလွှတ်ပေးလိုက်တာ စက်ဘီးက
ကုန်းတက်လေးအတိုင်းနောက်ပြန် တရွတ်တိုက်ဆွဲပြီး ဆေးရိုးပင်နား
ကိုရောက်သွားတော့ တာပဲ…ငါလဲကြောက်ကြောက်နဲ့ ကိုမြင့်အေးတို
့အိမ်ဖက်ပြေးတာ ပဲသိလိုက်တော့ တယ် နောက်ပိုင်း ငါမသိတော့ဘူး..
ကျော်စိုးပြန်ပြောနိုင်တော့ မှ အဖြစ်မှန်ကို တို့ လဲ သိရတော့တယ်
ငဇူးရာ…အဲဒီညက တော့ ကျော်စိုးကိုငါတို့ ပြန်ခေါ်လာကြတယ်..ဘဲခြံမှာတော့ 
အစောင့်မရှိပဲ တည ထားလိုက်တော့ တယ်..
နောက်တနေ့မိုးလင်းတော့ငါတို့ည က ကျော်စိုး သရဲအခြောက်ခံရတာ ကို
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပြန်ပြောဖြစ်တယ်..တို့ စိတ်ထဲ ဆေးရိုးပင်ကအကောင်ကို
လူကလဲပ်ိုများလာတာနဲ့တို့အကြံထုတ်ကြတယ်..နောက်ဆုံး ပြန်ဆော်ဖို့ 
လုပ်မယ် ဆိုပြီး …ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားတဲ့ ကောင်က သွား ဘုရားပေါ်တက်တဲ့
ကောင် က သွားပြီး ..ရသမျှ ဘုရားဆင်းတုတွေ ပုတီးတွေ ဘုရားပုံတော်တွေ
ပင်လာခဲ့တယ်…နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရရင် လမ်းထိပ်ညောင်ပင်မှာ စွန့် ထားတဲ့
ဘုရားခေါင်းကျိုး နဲ့ နတ်ရုပ်တောင်မထားဘူး အကုန်စုပြီး
ဆေးရိုးပင်ဆီချီတက်သွားကြတယ်..စုစုပေါင်းသူငယ်ချင်း ၈ ယောက်လောက်ရှိမယ်..
ကိုမြင့်အေးတို့အိမ်ရှေ့ရောက်တော့လှမ်းအော်ခဲ့သေးတယ်…ကိုမြင့်အေးရေ
ကျနော်တို့ တော့မလိမ်မိုးမလိမ်မာလေးတွေကို ဆုံးမ မလို့ဗျို
့….ညလာခဲ့မယ်..လို့အော်ပြောပြီး ဆေးရိုးပင်ဆီ သွား ဘုရားဆင်းတုတွေ
ကိုဒီညတော့ဒီအပင်မှာ စံပ္ပါယ်တော်မူပါ့ ဘုရားဆိုပြီး သစ်ပင်ခွတွေ မှာ
လိုက်တင် ပုတီးတွေ ပုံတော်တွေကို သစ်ကိုင်းတွေမှာ ချိတ်ထားလိုက်တာ
ပြီးတာ နဲ့ ညနေ ကိုမြင့်အေး အိမ်မှာလူစုံဖို့ ပြောပြီး ငါတို
့သူငယ်ချင်းတစု လမ်းခွဲလိ်ုက်တယ်..ညနေရောက်တော့ကိုမြင့်အေး အိမ်မှာ
ည၇နာရီလောက် လူစုံကြတယ်.. အဲဒီအချိန်က စပြီး ဆေးရိုးပင်ဖက် ကို အလှည့်ကျ
စောင့်ကြည့်နေကြတယ်..ည ၁၀နာရီကျော်တဲ့ အထိ ဘာထူးခြားမှု့ မှ
မတွေ့ရသေးဘူး..ည ၁၀ နာရီခွဲလောက်မှာ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ တယောက် က ငါ တို
့ကို အချက်ပြလာတယ်..ဟုတ်တယ်..ဆေးရိုးပင်အောက်မှာ မဲမဲပုကွကွ နဲ
့ဘာကောင်မှန်း မသိဘူး..အပင်ပေါ်မော့ကြည့်လိုက် ..အောက်နားမှာ
နေရတယ်..တော်တော်လေးကြာတယ် အဲလိုလုပ်နေတာ…နောက် အပင်ပေါ်ကို လွှားခနဲ
လွှားခနဲ တက် သွားတာ အပင်ပေါ်တောင် မရောက်လိုက်ဘူးထင်တယ်..ဘုန်း ကနဲ
ထပ်တက်ဖို့ ကြိုးစားတယ် ပြန်ပြုတ်ကျတာ ပဲ ဒီတခါတော့ဝူးဝူးဝါးဝါး
အသံကြီးကိုပါ မပီမသကြားလိုက်ရတယ်..မမှတ်သေးဘူး ထပ်တက်ဖို
့ဆိုင်းပြင်နေချိန်မှာ ကိုမြင့်အေး က သားရေခွနဲ့ လောက်စာလုံး တွေ ချ
ပေးလာတယ်..အကောင်းက ၂ လက် သားရေးကြိုးလျှော့ နေတာ တလက် ပေါင်းသုံးလက်နဲ့ 
ငါတို့ လဲ အသာကြည့်နေ သေးတယ်..ဒီခါ ပြုတ်ကျလာမှ ပြိုင်တူဆော်ဖို့ 
တိုးတိုး ညှိထားကြတယ်..မကြာပါဘူးပြန်တက်တာပဲ ပြုတ်ကျပြန်တာ ပဲ
ဘာပြောကောင်းမလဲ မနေ့ ည က အညိုးနဲ့သားရေခွ နဲ့ ဆွဲလိုက်ကြတာ
တဗြောဗြောပဲ ..ဒီတခါတော့ အဲဒီ မဲမဲပုကွကွ အကောင်ပြေးတော့ တာ ပဲ
ငဇူးရေ့..အဲနေရာမှ ထူးဆန်းတာ တခု က အပင်ရဲ့ လရောင် ရိပ်အောက်မှာ ပဲ
အဲအကောင်ကို ငါတို့ တွေ့နေရတယ် ကွ..ထွက်ပြေးပြီးဆေးရိုးပင် အရိပ်အောက် က
ထွက်သွားတယ် ဆိုရင်ပဲ လရောင်အောက်မှာ..မမြင်ရတော့ ဘူး..ပြေးတဲ့အသံလို
…ဘုတ်..ဘုတ်..ဘုတ် ပဲကြားရတော့ တယ်…
အဲဒီည တို့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတာ..မိုးလင်းခါနီး
ကြက်တွန်သံကြားရတဲ့အထ်ိကိုဘာမှ မထူးခြားလာတော့ ဘူး..ငါတို့ လဲ
အိမ်ပြန်အိပ်ဖို့ လုပ်ကြရတယ်..ကိုမြင့်အေး ကိုတော့မနက်မှ
ဘုရားတွေပြန်ပင့်တော့ မယ် လို့ ပြောပြီး ပြန်ခဲ့ကြတယ်..ငါတော့ 
အဲလိုလဲကြုံခဲ့တယ်..နောက်ပိုင်းငါအချိန်ရရင် ငါ့သူငယ်ချင်း ဘိုသိန်း
အမေကြီး ဖုတ်ဝင် တဲ့ အကြောင်း ထပ်ရေးဦးမယ်..ခုတော့ အိပ်ပြီကွာ..ဂွတ်ည..[/stextbox]
နောက်တနေ့မနက်မှာ ကျနော် ဆိုင်အတွက်ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေ ကို ပြင်ဆင်ပြီး သန်းဦးအလာကိုမျှော်နေမိတယ်။ နံနက် 93း0 လောက် ကျတော့သန်းဦး ရောက်လာတယ် ။ သူလဲကျနော် ကိုပြောပြချင်နေတယ် ထင်တယ် ရောက်ရောက်ချင်းပဲ မင်းမနေ့ က ပေးလိုက်တဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ငါ ကြက်ကြော်ဝယ်သွားပြီး အိမ်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ အမေ စားဖို့ကြက်ကြော် ၀ယ်လာတယ်လို့ လဲ ပြောလိုက်ရော အိပ်ယာပေါ်က တဟင်းဟင်း နဲ့ ညည်းနေရာ ကနေ အတင်းလူးလဲ ပြီး ထတယ်..ပြီးတော့ပေးစမ်း ဆိုပြီး အငမ်းမရစားတော့တာပဲ..ငါလဲ အိမ်ထဲမှာ မှောင်နေတာနဲ့ ရေနံဆီမီးအိမ်ကို ထွန်းပြီး အမေ့ကိုကြည့်လိုက်တာ အမေမဟုတ်ပဲ တခြားသူတယောက်လို့ တောင် ထင်ရတယ် ကြက်ပေါင်ကို ကိုက်တာများ အကွင်းလိုက် အကွင်းလိုက် အသားတွေ ပါးစပ်ထဲ ပလုတ်ပလောင်း ပါသွားတယ် ကြက်ပေါင်က အရိုးကို တဂျွတ်ဂျွတ်နဲ့ဝါးနေလိုက်တာအသံတွေတောင်ကြားရတယ်..ငါလဲ အစာနင်မှာ စိုးရိမ်ပြီး အမေအရိုးတွေထွေးထုတ် လို့ပြောပြီး လက်ခုပ် နဲ့ ခံပေးထားတာထွေးမထုတ်ပဲ ငါ့ ကို မျက်လုံးစိမ်းစိမ်းကြီး နဲ့ပြန်ကြည့်နေတယ် ။ငါလဲ အမေဆိုပေမယ့် ကြက်သီးတွေတဖြန်းဖြန်း ထလာတယ် ။ နောက် ရေတခွက်တိုက်ပြီး အိပ်ယာပေါ် ပြန်လဲ ပေးလိုက်တော့ ခဏပဲ ကြာတယ် အိပသွားလိုက်တာ တုတ်တုတ်တောင်မလှုပ်ဘူး မနက်မိုးလင်အထိပဲဆိုပါတော့ ။ ခုမနက် ငါ မင်းတို့ ဆီ လာတော့မှာလိုက်သေးတယ် သန်းဦး ဒီညလဲပြန်လာရင် ကြက်ကြော်ဝယ်လာခဲ့လို့ မှာလိုက်တယ် ။အဲဒါပဲ သူငယ်ချင်းရာ ငါလဲ မဆုံးဖြတ်တတ်တော့ဘူး ။ မင်းတို့ ပဲ ဆုံးဖြတ်ပြီး ကောင်းသလိုသာစီစဉ်ပါတော့လို့ ပြောတယ် ။
ကျနော်တို့လဲ သန်းဦးကို ဆိုင်စောင့်နေရန်ပြောပြီး စက်ဘီ တစီးနဲ့ကျော်စိုးတို့ ရှိရာဆီကို ထွက်လာပါတယ်။ စုရပ်တခုလိုဖြစ်နေတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်တော့လူစုံတွေ ရတယ် ။ သူတို့ ကိုကျနော် အကြောင်းစုံပြောပြ လိုက်တော့မနေ့က စုံစမ်းထားတဲ့ ဆရာဆီသွားကြဖို့ ပြောအားလုံးက သဘောတူညီလိုက်ကြတယ် ။ ကျနော် တို့ လဲ အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲ စက်ဘီးကိုယ်စီနဲ့ ထွက်လာလိုက်တာဘေးက စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါထပ်တိုးလာလို့အားလုံးပေါင်း ၈ ယောက် ဆရာဆီသွားကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ဆရာနေတဲ့အိမ်ကိုရောက်လို အိမ်ပေါက်ဝ က လှမ်းဝင် လိုက်တယ် ဆိုရင်ရင် အမွှေးတိုင်နံ့တွေ တအိမ်လုံးလှိုင်နေပါတယ် ။ ၀င်ဝင်ခြင်း အိမ်ဦးခန်းက ဘုရားကျောင်းက အတော်အတန်ကြီးများကျယ်ပြန့် ပြီး ကန်တော့ ပွဲများ ဘုရားရုပ်တုများ အခြား ဘိုးတော် မယ်တော် အစရှိတဲ့ ပုံတော် တွေ အပြည့် ရှိနေပါတယ် ။ ဆရာဆိုသူက အသက် သိပ်မကြီးပါဘူး။ ကျနော် တို့ ကို လာရင်းအကြောင်းကို မေးပါတယ် ။
ကျနော် တို့ က လဲ သန်းဦးအမေရဲ့ဖြစ်ပျက်နေပုံတွေ ကို ပြောပြပါတယ်။ နောက်ဆရာက ခုလို ဖြစ်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ လို့ မေးတော့ ကျနော် တို့တိတိကျကျ မဖြေနိုင်ပါဘူး ။ သန်းဦးကိုယ်တိုင် က လဲ သေသေချာချာ မသိတာ မို့အချိန်ကာလ ကိုမပြောနိုင်ပါဘူး ။ ဒါနဲ့ ပဲ ဆရာ က ခဏ စောင့် ပါ ပြောပြီး ဘုရားခန်းထဲ ၀င်သွားပါတယ် ။ ဘုရား မှာ အမွေးနံသာတိုင်များ ထပ်မံ ထွန်းညှိ အခြားသော သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ ရုပ်တုများ မှာလဲ ထပ်မံ ပူဇော်ပါတယ်။ ဒီနောက် ဆရာက ဘုရားကျောင်း ထဲမှာ တရားထိုင်သလို ပုံမျိုးဖြင့် ထိုင်နေပါတယ် ။ ကျနော်တို့လဲ ဆရာ့ကိုမျက်တောင်မခတ်တမ်း ကြည့်နေကြပါတယ် ။ ၁၅ မိနစ်လောက် အကြာမှာ ဆရာထိုင်နေရာကနေ တချက် တချက် တွန့်ခနဲ တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားပါတယ် ။ ဆရာထိုင်နေပုံမှာ သိပ်မူမမှန်တော့ပါ ။ အတန်ကြာတော့ဆရာ ထိုင်နေရာက နေ လှုပ်လာပါတယ် ။ နောက် ဘုရားခန်းထဲကနေ ထွက်လာပါတယ် ။ မျက်နှာ မှာလဲ ချွေးသီးချွေးပေါက်များ ကျနေပါတယ် ။
ထိုနောက် ဆရာက ပြောပြရာ မှာ သက်ဆိုင်ရာအစောင့်အရှောက် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ခွင့်ပန်၍ ဝေဒနာရှင်တွင် ၀င်ရောက် ပူးကပ်နေသော သူနှင့် သွားရောက် တွေ့ ဆုံရာ ဝေဒနာရှင်အား ထပ်မံမနှောင့်ယှက် စေလိုကြောင်း တောင်းပန်ပြောဆိုရာ မရသည့်အပြင် ဆရာအား၎င်း၏အစွမ်းဖြင့် ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ကြောင်း ပြောပြပါတယ် ။ဆရာ မှ လဲ ရိုးသားစွာဖြင့် ဝေဒနာရှင်တွင်စွဲကပ်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်အား မိမိ၏ အစွမ်းဖြင့်ဖယ်ရှားရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုပွင့်လင်းစွာ ၀န်ခံပြောဆိုပါတယ် ။ထပ်ဆင့်လမ်းညွှန်ရမည့်ဆရာတော်မှာ လဲ ခရီးလွန်နေကြောင်း ထို့ ကြောင့် ဝေဒနာရှင်အား ဆက်လက်ပြီး ထားရှိရဦးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ် ။ဆရာမှ ပိုမိုဆိုးဝါးမလာစေရန် တတ်နိုင်သေလာက် ထိမ်းသိမ်းပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောပြပါတယ် ။ဒါနဲ့ ကျနော် တို့ လဲ စိတ်မသာမယာဖြင့် ပြန်လာကြပြီး ။ ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရမည့် အကြောင်းအရာများသာခေါင်းထဲ ထိတ်လန့်စွာ တွေးတောလာပါတော့တယ် ။
ကျနော် တို့ ဆိုင်ပြန်ရောက်တော့ စောင့်မျှော်နေတဲ့ သန်းဦးကိုဆရာခရီးထွက်နေသဖြင့် မတွေ့ခဲ့ဟုသာ စိတ်သက်သာယာ ရစေရန် လိမ်လည်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် ။ထိုနေ့ည သန်းဦးလဲ ကျနော် တို့ မျက်စေ့မျက်နှာ ပျက်နေဟန်ကိုသတိထားမိပုံပေါက်ပါတယ် ။ တစောင့်စောင့် နှင့် မိုးတော်တော် ချုပ်မှဆိုင်မှပြန်သွားပါတယ် ။
နောက်တနေ့နံနံက်အစောကြီး မှာ ဆိုင်တခါးကို တဘုန်းဘုန်းထုနေသံကြားလို့ကျနော် တခါးထဖွင့်လိုက်တော့ မျက်စေ့သူငယ်အိမ်များ ပြူးကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေတဲ့ သန်းဦးကိုတွေ့ လိုက်လို့ ကျနော်အံ့သြ သွားပါတယ်။ သန်းဦးဘာဖြစ်လာတာလဲ လို့ မေးတော့ညက အမေတညလုံးသောင်းကျန်းနေကြောင်း သန်းဦးနင့်အကောင်တွေငါ့ ကို သတ်ဖိ်ု့ ကြံနေကြတယ် နင်အဲဒီအကောင်တွေ ကို သွားသတ်စမ်း နင်မသတ်ရင် နင့်ကိုငါသတ်မယ်ဟုပြောပြီး တညလုံးကြိမ်းမောင်းနေကြောင်း ။ သန်းဦးလဲ အိမ်မှာမအိပ်ရဲ သဖြင့် အိမ်နီးနားခြင်း တဦးအိမ်မှာ သွားရောက် အိပ်စက်ခဲ့ရကြောင်း ပြောပါတယ် ။ ကျနော်လဲ အံ့သြသွားတယ် ကျနော်တို့ ကျိတ်ကြံစည်တဲ့ ကိစ္စကို အိပ်ယာထဲမှာ လဲနေတဲ့ သန်းဦးအမေ က ထူးဆန်းစွာ သိနေခြင်းပါ ။ ကျနော် လဲ ဖုံးကွယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာ နဲ့ မနေ့ က အကြောင်းကိုပြန်ပြောပြလိုက်တော့သန်းဦးမျက်နှာ မှိုင်ကျသွားတာကိုတွေ့ လိုက်ရပါတယ် ။
ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ကျနော် သန်းဦးအမေ ကိစ္စပြီးမှ ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ဖို့ စိတ်ကူးပြီး ဆိုင်ဝမှာ “ယနေ့ဆိုင်ပိတ်သှ်”လို့ ရေးချိတ်ပြီး သန်းဦးကိုခေါ်ကာ စုံရပ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုစောစောထွက်လိုက်ပါတယ် ။ ကျနော် တို့ ပဲ စိတ်စောနေလို့လားမသိဘူး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလူစုံအောင်စောင့်ရတာတော်တော်ကြာတယ်လို့ စိတ်ထဲ မှာထင်ရင် အလာ နောက်ကျနေသော သူငယ်ချင်းများ မေတ္တာကောင်းကောင်းကြီးပို့နေမိပါတော့တယ် ။အဲဒီလိုထိုင်နေတုန်း ဘာသာခြား သူငယ်ချင်းတဦးဖြစ်တဲ့ ငထွန်းဆိုတဲ့ကောင်ရောက်လာပါတယ် ။မင်းတို့ သန်းဦးအမေအတွက်လုပ်နေတာတွေ ငါကြားတယ် မင်းတို့လုပ်လို့ တကယ်လို့ များအဆင်မပြေရင် သူတို့မှာဆရာတဦးရှိ်ကြောင်းယခုကိစ္စမျိုးတွင် အထူးစွမ်းကြောင်း ပြောပြပါတယ် ။ ကျနော်လဲရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲကျ ဖြစ်သွားပါတယ် ။ ဘာသာခြားတာမခြားတာအဓိက မဟုတ်ပါ ။ ကျနော်တို့ဖြစ်ချင်သည်မှာ သန်းဦးအမေထံတွင်ဖြစ်နေသော ကိစ္စ ကိုသေသေချာချာရှင်းလင်းသွားစေရန်သာရည်ရွယ်ထားကြသဖြင့် ငထွန်းကြီး မင်းငါတို့ ကို ကူညီပါကွာ ငါတို့ကိုမင်းတို့ဆရာဆီလိုက်ပို့ကွာ လို့ ပြောတော့ငထွန်းကြီး က လိုလိုချင်ချင် လိုက်ပို့ ပေးမည့်အကြောင်းပြောပါတယ် ။
ကျနော်တို့ လဲ လူစုံတာနဲ့ ငထွန်းကြီးခေါ်ရာကိုစက်ဘီးကိုယ်စီဖြင့် ထွက်ခဲ့ကြပါတယ် ။ဟိုရောက်တော့အိမ်ရှေ့ မှာ နေစာလှုံနေတဲ အဖိုးအို တယောက် က တွေ့လိုက်ပါတယ် ။ ငထွန်း ကအဖိုးအိုက ဂါဝရပြုလိုက်ပြီး ကျနော်တို့ နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ် ။အဘိုးအို က ကျနော် တို့ အားလုံးကိုလက်ယက်ခေါ်ပြီး တဦးချင်း ဦးခေါင်းကို လက်နဲ့ကိုင်ကာ ကျနော်တို့နားမလည်တဲ့ ဘာသာတမျိုးနဲ့ တတွတ်တွတ်၇ွတ်ဆိုနေပါတယ် ။ ကျနော် ထင်ထာတော့ ဆုမွန်ကောင်းများတောင်းပေးတယ်လို့ ပဲ ထင်ပါတယ် ။ ပြီးတော့အဖိုးအိုက ပြောလာပါတယ် . ငါစောင့်နေတာတဲ့..မနေ့ ည က ပဲ အကြောင်းစုံသိပြီး ပြီတဲ့ ။အားလုံးအဆင်သင့် လုပ်ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ် ။ ကျနော် စိတ်ထဲ မယုံသလိုလို ယုံသလိုလို ဖြစ်သွားပါတယ် ။ကျနော် စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာကို အဖိုးက သိဟန်တူတယ် ကျနော်မျက်နှာကို သေသေချာချာစိုက်ကြည့်ြုပီး ကောင်လေး စိတ်တွေမများနဲ့အဖိုးပြောတာသာလုပ် မဟုတ်ရင်အခြေအနေတွေပိုဆိုး လာမယ်လို့ ပြောတော့ကျနော် နဲနဲဖြုံသွားပါတယ် ။
ပြီးတော့ အဖိုးက ဘေးနားမှာအဆင်သင့်ချထားတဲ့ လေးလက်မသံလေးချောင်းကိုယူပြီး ညနေ နွားရိုင်းသွင်းချိန်( နွားရိုင်းသွင်းချိန်ဆိုသည်မှာ-မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းသို့နေလုံး ၀င်ရောက်သွားသော်လည်း မမှောင်မီစပ်ကြား အလင်းရောင် မပျောက်သေးချိန်) မှာဒီသံလေးချောင်းကို အိမ်ထောင့်လေးထောင့်ကတိုင် တွေမှာ ရိုက်ထဲ့ ပြီးတာ နဲ့ အိမ်အောက်ကို ဆင်းပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်း က စောင့်နေ ဘာသံမှမကြားတော့ဘူးဆိုမှ အိမ်ပေါ်တက်ပြီး ကြည့်လုပ်ပေတော့ပြောပါတယ် ။
အပြန်လမ်းမှာတော့ကျနော် တို့အားလုံး တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောကြပဲ အတွေးကိုယ်စီနဲ့  ပြန်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ပြန်ရောက်လို့လမ်းခွဲခါနီးမှာတော့ညနေ လေးနာရီတွက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာအားလုံး လူစုံရန် ပြောလိုက်မှာလိုက်ပါတယ် ။ညနေလေးနာရိ မတိုင်ခင် ကျနော် စောစောထွက်ပြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်တော့သူငယ်ချင်းအားလုံးစောစောရောက်နှင့်နေကြတာတွေ့ ရပါတယ် ။ဒါနဲ့ကျနော် တို့ လဲ အစီစဉ်အသေးစိတ်ကို တိုင်ပင်ကြပါတယ်။ အချိန်ကျတာနဲ့ အိမ်ပေါ်ကို သံတက်ရိုက်မည့်လေးယောက် ကို ရွေးလိုက်ပါတယ် ။ အကယ်၍ ထိုညတွင်သန်းဦးအမေ တွင်တွယ်ကပ်နေသောနာနာဘာဝကောင်ထွက်သွားပါက သန်းဦးအမေသေဆုံးမည်မှာ မုချပင် ထိုအခါတွင်နာရေးအတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့ ရှိသည်များကိုပါ ကြိုတင်တိုင်ပင်ထားလိုက်ကြပြိး သန်းဦးတို့ အိမ်ဖက် သို့ ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ် ။ကျနော်တို့ အပြင် စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ အခြားသူသုံးလေးယောက်ပါထပ်မံလိုက်လာကြပါတယ်။
သန်းဦးတို့ အိမ်ရောက်တော့သန်းဦးအမေကြီး က အိပ်ယာပေါ်မှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေပါတယ် ။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ကိုတွေ့ တာနဲ့ ယခင်ကအလွန်ဆဲဆိုကျိမ်းမောင်းရန် ခဲယဉ်းတဲ့ သန်းဦးအမေဟာ ပါးစပ်က ကြမ်းတမ်းစွာဖြင့် လာကြစမ်းသေချင်းဆိုးလေးတွေ နင်တို့ ပဲ လုပ်နိုင်မလား ငါကပဲလုပ်နိုင်မလား ..ကြည့်ကြသေးတာပေါ့.. ငါ့ကိုသတ်ချင်နေကြတယ် မဟုတ်လား လို့အသံသြသြကြီးဖြင့် ပြောနေပါတော့တယ် ။အဲလိုလဲပြောလိုက်ရော သတ္တိကောင်းတဲ့ ကျနော့် သူငယ်ချင်း ၂ ဦးက အချင်းချင်းလက်တို့ ပြီး ဆေးလိပ်ဝယ်မလိုလို ကွမ်းယာဝယ်မလိုလို နဲ့ပြန်လစ်သွားကြပါရောဗျာ ။ ကျနော် တို့ လဲ ကြောက်စိတ်ထက် ဖြေရှင်းချင်တဲ့စိတ်ကများနေတော့ဘာကိုမှ မကြောက်တော့ ပါဘူး။ဒီလိုနဲံပဲ နွားရိုင်းသွင်းချိန်ရောက်တဲ့ သန်းဦးတို့အိမ်ရှေ့ မြေကွက်မှာထိုင်ရင်း ရင်တထိတ်ထိတ်ဖြင့် စောင့်နေလိုက်ကြပါတယ် ။ အဲလိုနဲ့ နေလုံးဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့် အကြာလောက်မှာအိမ်ရိုက်သံနှင့် တူကိုယ်စီကိုင်ဆောင်ထားကြတဲ့ကျနော် အပါအ၀င်လေး ဦး က တဦးနှင့်တဦး မျက်စပစ်လိုက်ကြပြီး သန်းဦးတို့တဲအိမ်လေးထဲ ကိုတူကိုယ်စီနဲ့လွှားခနဲ ခုန်ဝင်သွားလိုက်ကြတာ တဲ့အိမ်ကလေးမှာ သိမ့်ခနဲသိမ့်ခနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ် ။ အိမ်ထဲရောက်တာနှင့်တပြိုင်နင့် ကိုယ်ရိုက်မယ့် အိမ်တိုင် ရှိအမြန်ဆုံးသွားကြပြီး သူထက်ငါအလုအယက် သံများကို ရိုက်လိုက်ကြပါတယ်။ အဲလိုရိုက်နေ ကြရာကနေ ကျော်စိုးကြီးထံမှာ အသံနက်ကြီးနဲ့အားခနဲ အော်သံကြားလို့ကျန်သုံးယောက်ပြိုင်တူ ကြည့်လိုက်ကြပါတယ် ။ကျနော် စိတ်ထဲတွင်စိုးကြီးတော့အတွယ်ခံလိုက်ရပြီလို့ ထင်လိုက်မိပါတယ် ။သေချာာအောင်ကြည့်လိုက်တော့ကျော်စိုး လက်မကြီးမှာ သွေးတွေရဲရဲတောက် ထွက်နေပါတယ် ။ ပြီးတော့ ကျနော် တို့ ကိုပြောပါတယ် ငါအမြန်သံရိုက်လိုက်တာ လက်မကိုချော်ထုမိသွားတယ်လို့အသံတုန်ယင်စွာဖြင့် ပြောသံကြားတော့ မှ ငိုရခက်ရယ်ရခက်ဖြစ်ရပါတယ် ။
ကျနော်တို့သံလေးချောင်းရိုက်ချိန်မှာ စက္ကန့်ပိုင်းမျှသာကြာမည် ထင်ပါသည် ။အချိန်ခဏတွင်းမှာပင် လေးယောက်လုံး အိမ်အပြင်ပြန်ရောက်ပြီးသား ဖြစ်နေပါတယ် ။ ကျနော်တို့ လဲ အဖိုးအို မှာလိုက်သည့်အတိုင်း အိမ်နှင့်ခပ်လှမ်းလှမ်း အကွာ မှာသွားရောက်စုရုံးပြီး အိမ်ဆီမှအသံများကို နားစွင့်နေလိုက်ကပါတယ် ။ စတင်သောင်းကျန်းပါပြီ အိမ်တွင်းပိုင်းဆီမှယောက်ကျားကြီးတယောက် ၏ အသံမျိုးဖြင့် သန်းဦးနင်တို့ တွေငါက်ို သတ်ကြတယ် နင့် ကိုပါငါသတ်မယ်..စသည်ဖြင့်အော်ဟစ်ကာ ကြမ်းခင်းများကိုတဖျောင်းဖျောင်းမြည်အောင် ထုခြေ ပါတော့ တယ် ။ ကျနော်လဲ အိမ်ဆီမှအော်ဟစ်သံများကိုအာရုံစိုက်နေရာကနေ အမှတ်မထင်သန်းဦးကို ကြည့်လိုက်တော့သန်းဦးပါးပြင်မှာ မျက်ရည်တွေစီးကျနေပါတယ် ။ကျနော်ရင်ထဲ စို့နင့်စွာခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အားလုံး စကားမပြောကြပဲမျက်လုံးများဖြင့် တဦးကိုတဦးကြည့်ကာဆိုလိုချင်သည်များကို နားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။
အချိန်သည်တဖြည်းဖြည်း ကုန်လွန်လာပါသည် ။ အလင်းရောင်မှာလဲပျောက်လုနီးပါး ဖြစ်ကာ အမှောင်ထု ကြီးစိုးလာပါသည် ။ခပ်ဝေးမှ ဖားကောင်ငယ်လေးများ ၊ ပုရစ် သည့်သတ္တ၀ါများ၏အော်သံများကြား လာရပါသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်း မှ တဲအိမ်ငယ်လေးများဆီမှမီးခွက်လေးများ မှအလင်းရောင်များလဲဟိုမှသည်မှ ထွက်ပေါ် လာပါသည်။ ထို့အတူပဲ အိမ်အတွင်း ဆူပူအော်ဟစ်သောင်းကျန်းနေသော သန်းဦးအမေသည်လည်း တစစဖြင့် ငြိမ်လာပါသည် ။တချက်တချက် ၀ူးဝူးဝါးဝါး မပီမသ အသံတို့ သာ ထွက်ပေါ်လာပါသည် ။ ည ကိုးနာ၇ီခွဲခန့်တွင်တော့ အိမ်အတွင်းမှ အသံများလုံးလုံးမကြားရတော့ ပါ သေချစေရန်နောက်ထက် နာရီဝက်ခန့်စောင့်ကြည့်ကြပြီး အနီးဝန်းကျင်အိမ်များမှ လက်နှိပ်ဓါတ်မီးများ ဌားရမ်းကာ အိမ်ထဲ သို့ဝင်လိုက်ယာမြင်ရသည့်မြင်ကွင်းမှာ သန်းဦးအမေသည် အိပ်ယာခြေရင်း ဖက်တွင်လဲကျနေပြိး ၀တ်ဆင်ထားသော အကျီင်္များ၊အနွေးထည်များအား ကုတ်ခြစ်စုတ်ဖြဲထားပြီး အနီးဝန်းကျင်မှ အရာဝတ္တုများ အား ဆွဲစုတ်ချေမွထားသည့်အတွက် ပြန့်ကျဲလို့ နေပါသည် ။
သေချာပါသည် သန်းဦးအမေထံတွင်တွယ်ကပ်နေသောမကောင်းဆိုးဝါးကောင်သည် ထွက်ခွာသွားပါပြီ။ဒီလိုနဲ့ကျနော် တို့ လဲ အနီးအနားရှိ လူကြီးသူမများအားအကြောင်းကြားကာ ကျန်ရှိနေသော သူငယ်ချင်းများအားသန်းဦးအမေ နာရေးအတွက် ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ရန်လူလွှတ်ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါသည် ။ ထို့နောက် အိမ်ရှေ့ တွင် ကုလားဖျင်းထိုးခြင်း ၊ မီးထွန်းရန်အတွက် မီးချောင်းများ မီးစက်များ နေရာချခြင်း ၊ နံနက်လင်းတွင်ရောက်လာကြမည့် မိတ်သင်္ဂဟ အပေါင်းတို့အားဧည့်ခံရန်အတွက် ကွမ်းဆေးလက်ဖက် ရေးနွေးကြမ်း စသည်တို့ အတွက် ကျနော်တို့စုစောင်းထားသည့်ငွေများမှ ကုန်ကျခံကာ ညတွင်းချင်း ချွေးတလုံးလုံးနှင့် စီစဉ်လိုက်ကျရာ ညသန်းခေါင်ယံတွင် အားလုံးပြီးစီးသွားသည့်အတွက် ကျနော်သည်ခဏ အနားယူရန်အတွက် သန်းဦးတို့ အိမ်ဖိနပ်ချွတ်အနီး ခုတလုံးတွင်ထိုင်လိုက်ရင် သန်းဦးအမေ အလောင်းပြင်ထားရာ သို့ လှမ်းကြည့်လိုက်ရာတွင်မတော့ ရင်နင့်ဖွယ်ရာမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရသည်အတွက် စိတ်မကောင်း အလွန်ဖြစ်သွားရပေါတော့ တယ် ။
အမေ့အလောင်းကိုဖက်ရင်း ငိုကျွေးနေတဲ့သန်းဦး တယောက် ။ သူထံမှထွက်ပေါ်လာတဲ့ငိုကြွေးသံများကတော့ 
“..အမေတခုသားတခု နေရတဲ့သားတို့ဘ၀…ကံဆိုးလိုက်တာအမေရယ်………”
စာပို့သမားလေးတစ်ယောက်ဟာ ဒီရပ်ကွက်ကိုပြောင်းလာပြီး စာပို့တဲ့ ပထမဆုံးနေ့အနေနဲ့ စက်ဘီးလေးနင်းပြီး တက်ကြွှစွာနဲ့ စာတွေပို့ပေးပါတယ်။ တနေကုန်ပို့ပြီးလို့ အိမ်နံပါတ် (၇၈) ရှေ့ကနေ စာပို့သမားလေးဖြတ်သွားတော့ တံခါးမကြီးပွင့်လာပြီး အိမ်ထဲက အဘွားအိုတစ်ယောက် ထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့ စာပို့သမားလေးကို “အမေ့စာ မပါဘူးလားဟင်…” လို့ မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ လှမ်းမေးလိုက်ပါတယ်။ စာပို့သမားလေးကလဲ ဒီနားတ၀ိုက်ကရှိတဲ့အိမ်တွေကို ပေးပို့တဲ့စာတွေကို အခုလေးတင်ဝေပြီးခဲ့ပြီမို့ အလုပ်သိမ်းပြီး အိမ်ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဆိုတော့ ဒီနေ့အတွက် အဘွားအိုရဲ့စာမပါတာ သေချာနေတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ မေးလာတဲ့ အဘွားအိုကို ဂရုဏာသက်မိပြီး အဘွားအိုစိတ်ကျေနပ်အောင် နောက်နေ့မှာပို့ရမယ့် စာထုပ်ထဲကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ရှာကြည့်လိုက်တယ်။ စာမရှိပါဘူး။ ဒါနဲ့ စာပို့သမားလေးက ကြင်နာစွာပြုံးပြပြီး “၀မ်းနည်းပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ အမေ့ရဲ့စာ မပါသေးပါဘူး။” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဘွားအိုက အလွန်စိတ်ပျက်အားငယ်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ တုန်ယင်နေတဲ့အသံနဲ့ “ဒီနေ့အမေ့မွေးနေ့ပါ။ နယူးဇီလန်မှာ ရှိတဲ့သားက အမေ့ရဲ့မွေးနေ့ရောက်တိုင်း လက်ဆောင်ပို့ပေးနေကျ။ ဒီနေ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်ရောက်ရမှာ၊ ဘာဖြစ်လို့များ မပါပါလိမ့်။” လို့ပြောပြီး မျက်ဝန်းထဲက မျက်ရည်များပါစီးကျလာပါတော့တယ်။ သနားတတ်တဲ့စာပို့သမားလေးက အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ အဘွားအိုကို “အမေရယ်…ဒီနေ့မပါလဲ နောက်နေ့ပါမှပေါ့။ ကျွန်တော် အမေ့ကို သေသေချာချာလာပို့ပေးပါမယ်နော်။” လို့နှစ်သိမ့်လိုက်တယ်။ အဘွားအိုကလည်း “အေးပါကွယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။” လို့ပြောပြီး အိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားတယ်။ စာပို့သမားလေးက အပြန်လမ်းမှာ စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ အဘွားအိုရဲ့အကြောင်းပဲ တွေးနေမိတော့တယ်။
နောက်တနေ့မှာ စာပို့သမားလေးက သူပို့ရမယ့်စာအထုပ်တွေထဲက အိမ်နံပါတ် (၇၈)ကို လိုက်ရှာတယ်။ မပါပြန်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ အဘွားအိုကို ဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ရမလဲလို့ စဉ်းစားလိုက်တယ်။ ရုတ်တရက် သူအကြံတစ်ခုရလာတယ်။ ချက်ချင်းပဲ ပို့စ်ကတ်တစ်ခုနဲ့ ပန်းစည်းတစ်စည်းကို သူဝယ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပို့စ်ကတ်ပေါ်မှာ “မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။” လို့ သူရေးလိုက်တယ်။ အဲဒီနောက် သွက်လက်တက်ကြွစွာနဲ့ပဲ သူစာပို့ဖို့ ထွက်လာခဲ့တယ်။ အိမ်နံပါတ် (၇၈) ရှေ့ရောက်တော့ လူခေါ်ခေါင်းလောင်းကိုဆွဲလိုက်ပြီး ပါးစပ်ကနေလည်း “အမေ စာပါတယ်ခင်ဗျ” လို့အော်ပြောနေတယ်။ သူအတန်ကြာအောင် အော်ခေါ်နေပေမယ့် အိမ်ထဲက ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ထွက်မလာပဲ တိတ်ဆိတ်လို့ နေပါတယ်။ ဒါနဲ့သူက ပို့စ်ကတ်လေးကို စာထည့်တဲ့ပုံးထဲထည့်ပြီး ပန်းစည်းလေးကိုတော့ တံခါးရွက်ကြားမှာ ချိတ်နေတုန်း ဘေးအိမ်က အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ထွက်လာပြီး၊ သူ့ကို “မောင်ရင်…ဒီအိမ်က လူမနေတာကြာပြီကွယ့်။ စာမှားထည့်နေပြီထင်တယ်။” လို့လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ သူကြောင်အမ်းအမ်းလေး ဖြစ်သွားပြီးမှ “နေပါတယ် အန်တီ။ မနေ့ကလေးတင် ဒီအိမ်ကအဘွားအိုတစ်ယောက် ထွက်လာပြီး ကျွန်တော့ကို သူ့စာမပါဘူးလား လို့မေးခဲ့သေးပါတယ်။” လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးကြီးက “လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းက အဲဒီအိမ်မှာ အဘွားအိုတစ်ယောက်နေခဲ့တာ မှန်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဒီလိုအချိန်မှာ နယူးဇီလန်မှာရှိတဲ့ သူ့ရဲ့သား မတော်တဆဖြစ်ပြီး ဆုံးသွားရှာတယ်။ အဲဒီသတင်းကို ကြားကြားချင်းမှာပဲ အဘွားအိုဟာ ရင်ကွဲနာကျပြီး ဆုံးသွားရှာလေရဲ့” လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ စာပို့သမားလေးဟာ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ ကြေကွဲခြင်း၊ အံ့သြခြင်း တို့ကို တပြိုင်နက်တည်း ခံစားလိုက်ရပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် သရဲပုံပြင်ဝတ္တုတိုထဲက “Birthday Present” ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ရေးတဲ့သူက William Smith လို့ပါရှိပါတယ်။ မေလ်းထဲမှ ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။